Mavhidhiyo matsva eApple aunogona kuchinjira kune iPhone | IPhone nhau
Mavhidhiyo matsva eApple aunogona kuchinjira kune iPhone
Apple yakaburitsa mavhidhiyo mashanu matsva pane yake YouTube chiteshi. Zvina zvacho zvinobva pamushandirapamwe wayo we "Chinja", uyo unotarisira kugonesa vamwe vashandisi vefoni (pasina nguva vanoti "Android") kuchinjira kune iyo iPhone.
Semavhidhiyo apfuura, iwo mapfupi mafomati, anenge gumi nemashanu masekondi, yakatarisa pane imwechete iPhone chimiro. Ehezve, ese ane mavara akajeka, akajeka mazano uye anotonakidza.
"Zvakatipoteredza" - IPhone yakaunganidzwa muzvivakwa zvisingatumire marara kune marara. Pandakaona vhidhiyo kekutanga, ndakafunga kuti ndave kuenda zvakanyanya ku "iyo iPhone haipinde tsvina", nekuti tinoona murume achiedza kukanda kofi yake munzvimbo ye iPhone asi hazviitike. Asi neizvi zvinoreva kuti mafekitori avo haatumire marara kune marara.
"Yakachengeteka" - Mune yakachena "I´ma ​​Mac, uye I´ma PC" maitiro, Apple inoratidza kuti iOS yakachengeteka zvakadii uchienzaniswa neApple. Vanosimbisa kuti izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuvandudzwa kunoramba kuchiitika kune iyo iPhone.
"Apple Tsigiro" - Ino nguva Apple inozvirumbidza nerutsigiro rwayo. Ini ndinofunga vanokwanisa kuzviita, yavo Support app inogara iripo uye (kunyanya kana iwe uine mudziyo pasi pewarandi kana neApple Care) sevhisi inogutsa kwazvo.
"Kurerukirwa" - Kune avo vachiri kusahadzika, Apple inoratidza kuti zviri nyore sei kuendesa mimhanzi yako, mapikicha uye zvese kune yako nyowani iPhone.
Aya mavhidhiyo ndiwo anokodzera webhusaiti yako, "chinja". Mariri, chero munhu arikufunga kuchinja kune iPhone anowana mhinduro dzemibvunzo yavo uye, chokwadika, anogona kutenga yavo nyowani iPhone.
Pamusoro peaya mavhidhiyo mana, Apple yakaburitsa vhidhiyo yechishanu ye "How kupfura pa iPhone" izvo zvinopinda ayo akaburitswa nguva pfupi yadarika.
Iyo vhidhiyo nyowani inotiratidza maitiro ekuti uwane zvakanyanya kubva mukugadzirisa iro ruvara rwemufananidzo. Pasina kupokana, rimwe remabasa andinonyanya kushandisa, kunyangwe mumaonero angu vhidhiyo yacho ipfupi. Nekudzvanya pa "muvara" zvakare, isu tinowana mamwe akawanda ma parameter kuti tikwanise kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Mavhidhiyo matsva eApple aunogona kuchinjira kune iPhone
Apple inosimbisa kuti inoshandisa masevhisi eGoogle ekuchengetedza
Beta yechitatu yeIOS 11.3 inoshatisa bhatiri rezvigadzirwa zvekare